Metro Istanbul ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာသစ် RayHaber | raillynews
[21 / 02 / 2020] Menemen နှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းအတွက်ALOSBİထက်ပိုကောင်းသည်AliağaÇandarlı Highway	35 Izmir
[21 / 02 / 2020] CHP မှ Yavuzyilmaz: 'TCDD Derailed'	06 တူရကီ
[21 / 02 / 2020] 1915 Çanakkaleတံတားထ	17 Canakkale
[21 / 02 / 2020] Melစတြေးလျတွင်ဆစ်ဒနီမဲလ်ဘုန်းရထား ၂ စီးသေဆုံး	61 သြစတြေးလျ
[21 / 02 / 2020] Steamboat ဂီတသမားရွေးချယ်မှုများဆက်လုပ်ပါ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metro Istanbul ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ
Metro Istanbul ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ
14 / 02 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, Metro အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ
မက်ထရိုကုမ္ပဏီအသစ် metro ဖြစ်ပါတယ်
Özgür Soy သည် Metropolitan စည်ပင်သာယာ၏ Metropolitan မြူနီစီပယ်အောက်ရှိလူမှုမီဒီယာအကောင့်များတွင်သတ်မှတ်ထားသောတာဝန်အသစ်အရကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင်“ မစ္စတာ Özgür Soy က "Metro Istanbul မိသားစုကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ရာထူးသစ်မှာအောင်မြင်မှုရချင်ပါတယ်"
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Mr. ကျွန်ုပ်တို့သည်Özgür Soy သို့“ Metro Istanbul မိသားစုမှကြိုဆိုပါတယ်” ဟုပြောပြီးသူ၏ရာထူးသစ်တွင်အောင်မြင်မှုရစေလိုသည်။ pic.twitter.com/ctcg4hbwfo
- Metro Istanbul (metroistanbul) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2020
Özgür soy ကားအဘယ်သူနည်း။
Özgür Soy ကို ၁၉၇၀ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဂျာမန်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်Boğaziçiတက္ကသိုလ်တွင်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး INSEAD မှစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုလက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုစင်ကာပူအစိုးရ၏ပညာသင်ဆုဖြင့်စင်ကာပူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ သူသည်အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းကိုတက်ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
Kumport, Procter & Gamble, DHL, Schneider Electric, Arçelik, Borusan Logistics, Trenkwalder စသည့်ကုမ္ပဏီများတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္workedတွင်ပါဝင်ခဲ့သူÖzgür Soy၊ Yeditepe တက္ကသိုလ်နှင့် UU နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း, တူရကီဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများအပြားညီလာခံမှာစပီကာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ထားပါတယ်အပ်ပေးတော်မူ၏။
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Istanbul Metropolitan Municipality ၏ Metropolitan Municipality အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူÖzgür Soy တွင်ကလေး ၂ ယောက်ရှိပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်သည်။
အထွေထွေမန်နေဂျာ İsa Apaydın en-PUBLIC-DER အထွေထွေညီလာခံပူးပေါင်းမည်
Alstom Grid တူရကီပါဝါ Transformers စက်ရုံအသစ်ကအထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည်
TLS ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Aykut Yakalı, Sektör
နယူးမှ General Manager samulaş!
brush Arınç'tan Bursa Cableway ကုမ္ပဏီ
အီသီယိုးပီးထဲမှာYapıray Rayton ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီအိပ်ပျော်စက်ရုံ
ဗြိတိန်မီးရထားကုမ္ပဏီပြစ်မှုဆိုင်ရာပေါ့ဆမှု၏ 1 သန်းပေါင်
TCDD တင်ဒါအတွက်အကြီးအကျယ်အရှုပ်တော်ပုံ! 1,5 သည်ခင်ပွန်း၏ကုမ္ပဏီသို့ 32 နုိုင်သည်
အထွေထွေမန်နေဂျာ Keskin သည် Istanbul လေဆိပ်တတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုစစ်ဆေးသည်
Baraçlıမှ General Manager: ကျနော်တို့ iett` အတွက်နိုင်ငံတကာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်လျှောက်ထား
TCDD ၏ဒုတိယအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Veysel Kurt သည် Izmir သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်သမ္မတGülသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
အထွေထွေမန်နေဂျာကင်TÜDEMSAŞ Yildiray Koçarslတာဝန်ပေးအပ်ဖြစ်ပါတယ်
TÜVASAŞထို့နောက်သူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်အထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Inal သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
TÜVASAŞနှင့် ASELSAN တို့သည်အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားထုတ်လုပ်မှုအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်
MTB ဥက္ကÖ္ဌÖzdemir: 'Container Port Project သည် Mersin မှပိုင်ဆိုင်သည်'
Menemen နှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းအတွက်ALOSBİထက်ပိုကောင်းသည်AliağaÇandarlı Highway
CHP မှ Yavuzyilmaz: 'TCDD Derailed'
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဖေဖော်ဝါရီလ 21 1931 Değirmisaz-Balikesir
Tesla နေရာတွင် Bill Gates နေရာတွင် Porsche Taycan ဖြင့်အစားထိုးသည်